author - कान्तिपुर संवाददाता - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर संवाददाता का लेखहरु
हुप एन्ड स्टिक रोलिङ रेस
कान्तिपुर संवाददाता , पुस २, २०७४
यो खेल र हुप रोलिङ रेसमा एउटा छडीको मात्र भिन्नता छ । यो खेलमा एक पटकमा जति पनि बालबालिका सहभागी हुन सक्छन् ।
मुलुक भित्रैका गन्तव्य
गत कात्तिक २३ गते बिहान हामी शैक्षिक भ्रमणमा निस्कने कुराले मलाई अघिल्लो रात नै राम्रोसँग निदाउन दिएन । कहिले बिहानको घाम झुल्केला र यात्रा सुरु गरौँला भन्दैमा रात बितेको पत्तै पाइएन । मेरा सबै साथी पोखरा पुगिसकेछन्, मेरो त बसै छुटेछ ।
के के हुन्छन् मनमा,तीता मीठा कुरा ।कुनै बयान गर्छन्, दु:ख,कोही अनेक सोच्दै हुन्छ सुख ।
कति राम्री पुतली त्योबगैंचामा उडेकीजीउभरि रङ्ग भर्दै फूलससँगै गुडेकी
प्रा.डा. माधवीसिंह शाहको पुस्तक ‘अघि सरेका पाइला’ सार्वजनिक भएको छ । वरिष्ठ कथाकार माया ठकुरीले राजधानीमा पुस्तक लोकार्पण गरिन् । त्रिवि अर्थशास्त्र, केन्द्रीय विभागकी पूर्वप्रमुख शाह मानव अधिकार, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी छन् ।
गीताको ‘भावनाको भेल’
कवि तथा सञ्चारकर्मी गीता मैनाली ‘भावनाको भेल’ कविता संग्रहसहित आएकी छन् । संग्रहका तीन कवितालाई शनिबार सर्वनाम थिएटरमा मञ्चन पनि गरियो भने गीता आफैंले कृतिको लोकार्पण गरिन् ।
‘हामी’ मा कृष्ण र ममता
‘हामी कवि र कविता’ को ५२ औं शृंखलामा कविद्वय कृष्ण प्रधान र ममता कर्माचार्य प्रस्तुत भए । लुनकरणदास गंगादेवी साहित्य कला मन्दिर र सर्वनाम थिएटरले हरेक महिनाको पहिलो दिन गर्दै आएको शृंखलाको पहिलो चरणमा कवि कर्माचार्य प्रस्तुत भइन् ।
‘कृ’ को ट्रेलर सार्वजनिक
अनमोल केसीका कारण पनि ‘कृ’ यस वर्षको बहुप्रतीक्षित फिल्म बनेको छ । हालका सर्वाधिक स्टारभ्यालु बोकेका अनमोलको ‘गाजलु’ पछि झन्डै दुई वर्षको अन्तरालमा दर्शकसामु आउन लागेका हुन् । माघ २६ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘कृ’ मा अनमोलको जोडीको रूपमा अदिति बुढाथोकीले डेब्यु गर्दै छिन् ।
‘गुरुकुल नखुलेको भए म रक्सी बेचिरहेको हुन्थेँ’
उम्दा अनुहार पनि हैन । बलिष्ठ ज्यान पनि छैन । तर विपिन कार्की ‘हिरो’ बनेर देखिए ‘जात्रा’ मा । हुन त त्यसअघि नै उनी ‘पशुपति प्रसाद’ बाट भष्मे डनका रूपमा मासमा चिनिइसकेका थिए । हरेक फिल्म र हरेक चरित्रमा भिन्न अवतारमा पदार्पण हुने विपिनको शैली यति बेला ‘नाका’ मा आउँदै छ ।
बैंकिङ समूहको कारोबार बढ्दो
पछिल्ला साताहरूमा कुल कारोबारमा बैंकिङ समूहको हिस्सा बढ्दो छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सूचीकृत कम्पनीलाई १० वटा समूहमा वर्गीकरण गरी कारोबार गराउँदै आएको छ । तीमध्ये बैंकिङ समूहको हिस्सा प्राय: धेरै रहन्छ । तर, केही महिनायता बैंकिङ समूहको हिस्सा घट्दो क्रममा थियो ।
यहाँका विभिन्न स्थानमा लप्सी प्रशोधन गरी परिकार तयार गर्ने सिजन सुरु भएको छ । पर्वतलाई लप्सी उत्पादनमा अग्रणी जिल्ला बनाउने अभियानमा जुटेका व्यवसायीहरू हिउँदेखेती सकेर फुर्सदिलो समयमा प्रशोधनमा जुट्न थालेका हुन् ।
‘पोजिसन बनाएर एकताको कुरा गर्नु हुँदैन’
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा झन्डै दुई तिहाइ नजिक सिट ल्याएको छ । वामपन्थी दलहरुले यति धेरै संसदीय शक्ति आर्जन गर्नुमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र दुई दलबीचको एकताको नाराले काम गरेको थियो ।
नेपालको पहिलो शारीरिक सुगठन संस्था नेपाल ब्यायाम मन्दिरले शनिबार १७ औं वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा २०७३/७४ सालमा पदक जितेका आफ्ना खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ । सभाले ज्याठामा बहुआयामिक भवन र अत्याधुनिक व्यायामशाला निर्माण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।
इन्डोर क्रिकेट हुने
डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती विद्यालयले प्रथम छात्रछात्रा इन्डोर क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । पुस ४ देखि ९सम्म भनिमण्डलस्थित डीएभी कलेजमा हुने स्पर्धाको छात्रतर्फ १० स्कुल र छात्रातर्फ ५ स्कुलले भाग लिने शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
सुदूरपश्चिम ११ स्पोर्टस क्लबका दुवै टोली धनगढीमा जारी तेस्रो ग्यालेक्सी पब्लिक फारवेस्ट पशुपति कप फुटबलको क्वाटरफाईनल पुगेको छ । सुदूरपश्चिम एले नेपाल प्रहरी प्रदेश नम्बर ७ लाई ४–० ले हरायो । विनोद केसीले र्२, जीवन चौधरी र रामसिंह रानाले १–१ गोल गरे ।
खुकुरी मार्सल आर्ट्स
जीवन लोहारले पाँचौं राष्ट्रिय गोर्खा खुकुरी मार्सल आर्ट्स च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेका छन् । मनमैजुमा भएको पुरुष ४९ केजीमुनि तौलमा जीवनले सन्जेन केसीलाई हराए ।
प्रथम इसिन कान क्योकुसिन कराँते एसियन कप काता च्याम्पियनसिपमा पदक जितेका तीन खेलाडी शनिबार नगदसहित सम्मानित भएका छन् । एकल कातामा स्वर्ण जितेका ज्ञानबहादुर तामाङ २५ हजारसहित सम्मानित भए । कांस्य जितेका डिककुमार प्रधान र एलेन्स पौडेलले ५–५ हजार पाए ।
नेपाल र बंगलादेश भिड्दै
साफ यू–१५ महिला फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आइतबार नेपालले आयोजक बंगलादेशको सामना गर्दै छ । उपाधि जित्ने लक्ष्य लिएर ढाका पुगेको नेपालले उपाधि दाबेदार मानिएको बंगलादेशको चुनौती स्विकार्ने छ ।
हल्चोकमा नर्सहरू दौडिए
बिरामीको स्वास्थ्योपचारमा सक्रिय भूमिका खेल्ने नर्सहरू शनिबार रंगशालाको ट्रयाकमा देखिए । अस्पतालमा सधैं सेतो ड्रेसकोडमा चौबिसै घण्टा बिरामीको सेवामा तल्नीन नर्सहरू ट्रयाकमा फरक–फरक पोसाकमा थिए ।
फाइनल खेलमा सुरुआती जोडीको ब्याटिङ चलेपछि नेपालले प्रथम ह्विलचियर क्रिकेट च्याम्पियनसिप २०१७ को उपाधि जितेको छ । बंगलादेशलाई ५४ रनले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि उचालेको हो ।
ज्ञानी र रेजिनालाई स्वर्ण
आर्मीकी प्रतिज्ञा भण्डारी र ज्ञानी चुनाराले आठौं कोरियन एम्बासडर राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा शनिबार स्वर्ण पदक जितेकी छन् । महिला ७३ केजीमा प्रतिज्ञा र ज्ञानीले ६२ केजी तौलसमूहमा स्वर्ण जिते ।
पोखरा राइनोजमा तीन पाकिस्तानी
टीभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) का लागि पोखरा राइनोजले शनिबार आफ्नो अभ्यास पूरा गरेको छ । पोखरा रंगशालाको मैदानमा राइनोजले पाँच दिन अभ्यास गरेको थियो ।
चितवन टाइगर्सका खेलाडी सार्वजनिक
स्तरिय क्रिकेट खेलेर दर्शकलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने लक्ष्यसाथ चितवन टाइगर्सले टीभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटका लागि शनिबार आफ्नो टिमका खेलाडी सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल शनिबार मलेसियालाई ७२ रनले पराजित गरी एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेटको फाइनल पुगेको छ । आइतबार हुने फाइनलमा नेपालले सिंगापुरको सामना गर्नेछ । थाइल्यान्डमा भइरहेको प्रतियोगितामा वर्षाका कारण निर्धारित ओभरभन्दा एक ओभर घटाई ३४ ओभर बनाइएको थियो ।
जिल्लाका दुई ठाउँमा शनिबारदेखि यातायात सेवा सुरु भएको छ । पैदल यात्रा गर्दा १० घण्टा लाग्ने गुल्मी सिमानाको बरेङ र सदरमुकामबाट ६५ किमि पश्चिमको पाण्डवखानीमा बस चल्न थालेको हो ।
मकवानपुर क्षेत्र २ ‘ख’ का प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँले स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन् । उनले शनिबार हर्नामाडी स्वास्थ्यचौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले दिवंगत दाजु राजकुमारको स्मृतिमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको बताए ।
डढेलोले सय हेक्टर सखाप
ताराखोला गाउँपालिका ५ मा पर्ने मसिनाडाँडा तीनचुले मूलपानी सामुदायिक वनको करिब सय हेक्टर डढेलोले क्षति पुर्‍याएको छ । स्थानीय टकबहादुर बुढाले खरबारीमा लगाएको आगो वनमा फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार बेलुकीदेखि फैलिएको आगो स्थानीय, प्रहरी र सेनाले मिलेर शनिबार निभाएका हुन् ।
पूर्व र पश्चिम रुकुम दुई जिल्ला हेर्न एउटा मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तोकिएको छ । शिक्षा विभागको परिपत्रअनुसार पश्चिमका विद्यालयका साथै पूर्वका विद्यालय तथा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुम पश्चिमले नै गर्ने भएको हो ।
चिसो बढेसँगै तराई क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । चिसो स्याँठ र बाक्लो कुहिरोले सडकमा चहलपहल घटेको छ । जिल्लामा बिहान ९ बजेतिरको तापक्रम १० देखि १३ डिग्रीसम्म मात्र थियो ।
वन मन्त्रालयले तयार गरेको वन लगानी कार्यक्रम (फरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम) लाई विश्व बैंकको जलवायु लगानी कोष (क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड/सीआईएफ) ले स्वीकृत गरेको छ । करिब ११ अर्ब रुपैयाँको ८ वर्षे उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
जिल्लाको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान सेवनमा रोक लगाएको छ । धूमपान तथा सुर्ती सेवनबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्नका लागि नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, बिँडी, सुर्तीलगायतका धूमपान सेवनमा रोक लगाएको हो ।
द्वन्द्वको समयमा माओवादीले कब्जा गरेको घरजग्गा फिर्ताका लागि बाग्चौर नगरपालिका ४ देउरालीखोलाका कृतिबहादुर बस्नेतले बाग्चौर नगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् । उनले क्षतिपूर्ति सहित घरजग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
जयतु संस्कृतम्मा पोख्रेल
२००४ को जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा २०५५ सालमा स्थापना भएको जयतु संस्कृतको अध्यक्षमा डा. बद्री पोख्रेल चयन भएका छन् ।
झापाका छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बाह्रदशी गाउँपालिका ३ मा मे४प ४३९६ नम्बर मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई कल्भर्टमा ठोक्किँदा १७ वर्षीय सोनु गणेशको शुक्रबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन माग
पाटनका बुद्धिजीवीहरूले ललितपुरलाई ‘सांस्कृतिक केन्द्र’ बनाउन निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूसँग माग गरेका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये ललितपुर कला संस्कृतिको दृष्टिकोणले ऐतिहासिक महत्त्वको थलो भएको भन्दै पाटनवासीले माग गरेका हुन् ।
पशुपति क्षेत्रमा डेढ दर्जन संरचना पुनर्निर्माण हुँदै
विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपतिनाथ क्षेत्रमा डेढ दर्जन संरचना पुनर्निर्माण गरिँदै छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट आएको बजेटबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ती संरचना पुनर्निर्माण सुरु गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार दिव्या रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन प्रालिलाई सुदूरपश्चिमका चार जिल्लामा खोटो संकलन गर्न दिन आदेश दिएको छ ।
‘अध्यादेश रोक्न मिल्दैन’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशबारे संविधान विद्हरूसँग छलफल गरेका छन् । कांग्रेस निकट करिब एक दर्जन वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग शनिबार भएको छलफलमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पनि थिए ।
७० हजार मत बदर
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जिल्लामा ७० हजारभन्दा बढी मत बदर भएको छ । यो संख्या प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याउने राजपाका शरतसिंह भण्डारीको भन्दा झन्डै तेब्बर हो ।
जग्गा प्लटिङ अनुमति- छानबिन गर्दै अख्तियार
कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न रोक लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय उल्टाउँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले केही सीमित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई ‘जमिन कित्ताकाट तथा बिक्री वितरण’ अनुमति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ ।
‘सत्ता लम्ब्याउने प्रयास’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा खोचे थापेर कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मान्यता र जनताको अभिमतलाई अवमूल्यन र अस्वीकार गरेको ओलीको आरोप छ ।